ukuvavanywa kwesoftware kunye neentlobo ezahlukeneyo zokucinga
Eyona Qa Ukuvavanywa kwesoftware kunye neentlobo ezahlukeneyo zokucinga
Ukuvavanywa kwesoftware kunye neentlobo ezahlukeneyo zokucinga
Xa kuziwa kuvavanyo lweSoftware, ingqondo yomntu sesona sixhobo sokuvavanya. Xa sivavanya isoftware, siqhubekeka ulwazi, sisombulula iingxaki, sithatha izigqibo kwaye senza izimvo ezintsha.
Njengabavavanyi, kufuneka sazi iintlobo ezahlukeneyo zokucinga ukuze sizinxibelelanise neemeko ezahlukeneyo. Umzekelo, xa sijonga umzobo woyilo, kufuneka sihlalutye. Xa sicinga ngemeko, kufuneka sicinge ngendlela engaqondakaliyo.
Imisebenzi eyahlukeneyo yovavanyo ifuna iinkqubo ezahlukeneyo zokucinga. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba nakho 'ukutshintshela' kwiindlela ezahlukeneyo zokucinga zomsebenzi ngamnye.
Iindidi zokuCinga kuMxholo woVavanyo lweSoftware
Makhe sihlolisise iintlobo ezahlukeneyo zokucinga kunye nendlela nganye enokusetyenziswa ngayo kwimeko yoVavanyo lweSoftware kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yovavanyo.
UkuCinga ngokuBumba okanye ukuCala
Ukucinga okuyilayo kuthetha ukujonga into ngendlela entsha. Yiyo kanye inkcazo yokucinga ngaphandle kwebhokisi.
Kwindlela yokucinga yokuyila, sizahlula kwiithiyori, imigaqo kunye neenkqubo kwaye senze izinto ngendlela entsha nengcinga.
Kwimeko yovavanyo, umzekelo, oku kunokuba xa sisebenzisa iindlela ezintsha zovavanyo, o.k.t. Inkqubo yovavanyo yokubini ukunciphisa inani leemvume kodwa kwandise ukogquma.
Ukucinga ngokuhlalutya kubhekisa kumandla okwahlulahlula yonke into ibe ngamalungu ayo asisiseko ukuze kuhlolwe iindawo kunye nobudlelwane babo. Kubandakanya ukucinga ngendlela enengqiqo, inyathelo ngamanyathelo wokwahlula inkqubo enkulu yolwazi kwiindawo zayo.
Umzekelo xa sijonga kwimizobo yoyilo kwaye sizama ukufumanisa indlela ngenkqubo kunye nezinto ezizezinye.
Umzekelo olungileyo kuxa sihlalutya okwenzekayo xa umsebenzisi engenisa ifom kwaye isicelo sithunyelwe kwi-API enxibelelana noVimba weDatha.
Ukucinga okubalulekileyo kukukwazi ukuqiqa ngokuhlalutya ngononophelo into ethile ukufumanisa ubunyani bayo okanye ukuchaneka kwayo. Imalunga nokuba ngumfundi okhutheleyo kunokuba ngumamkeli wolwazi ongenzi nto.
Ukucinga okuqinisekileyo lolona hlobo lubalulekileyo lokucinga kwimeko yovavanyo. Njengabavavanyi, kuya kufuneka sihlale sibuza imibuzo kunye nokucingela kunokuba sizamkele ngokwexabiso lobuso.
Umzekelo, xa ujonga ibali lomsebenzisi, sinokubuza imibuzo malunga Inkqubo yokwamkelwa endaweni yokubamkela njengoko sinikwe thina.
Ukucinga okuphathekayo kubhekisa kubuchule bokuqonda kunye nokusebenzisa ulwazi oluyinyani. Kukuchasene nokucinga okungabonakaliyo.
Abantu abacinga ngokungathandabuzekiyo bathanda ukulandela imiyalelo kwaye banezicwangciso ezineenkcukacha. Bayayicaphukela nantoni na engacacanga okanye engaqondakaliyo. Njengabantu abacinga ngokhonkrithi bakhetha ukusebenza noluhlu kunye neespredishithi.
Kwimeko yokuvavanywa, kulapho abavavanyi bafuna ukuba yonke imiyalelo ibekhona ngaphambi kokuqala kovavanyo. Umzekelo abanye abavavanyi abazukuqala ukuvavanya de zichazwe zonke iindlela zokwamkelwa kwibali lomsebenzisi.
Ngokuchasene nokucinga okwenziwe ngekhonkrithi, ukucinga ngokungaqondakaliyo kubhekisa kubuchule bokucinga ngezinto ezingekhoyo ngokwenene.
Abavavanyi besoftware abacinga ngendlela engaqondakaliyo bajonge ukubaluleka okubanzi kwezimvo kunye nolwazi endaweni yeenkcukacha eziphathekayo.
Umzekelo kwimeko yovavanyo kunye neeseshoni zokulungisa amabali, abavavanyi abanesakhono sokucinga ngendlela engaqondakaliyo banokuza neemeko zovavanyo ezinomdla. Endaweni yokufunda nje iikhrayitheriya zokwamkelwa, abavavanyi baya kujonga ibali lomsebenzisi kwaye bazame ukuqonda ukuba oku kunokunxibelelana njani okanye kuchaphazele ezinye iinxalenye zenkqubo.
Ukucinga okungafaniyo kubhekisa kubuchule bokuvelisa izimvo zokuyila ngokujonga uninzi lwezisombululo ezinokubakho kumzamo wokufumana enye esebenzayo. Kubandakanya ukudibanisa iinyani kunye nedatha kwimithombo eyahlukeneyo emva koko kusetyenziswe ingqiqo kunye nolwazi ukwenza izigqibo.
Xa sisenza uvavanyo lokuhlola, siyafaka ii-oracle kunye ne-heuristics kwaye wenze izigwebo ngokusekwe kumava ethu angaphambili.
Ukutshintsha okuguqulweyo kukukwazi ukubeka iziqwenga ezahlukeneyo okanye imbono yesihloko kunye ngendlela ehleliweyo, nengqiqo yokufumana impendulo enye.
Umzekelo, xa sizama ukufumana oyena nobangela wesiphene, siqokelela ulwazi olufanelekileyo kwaye sikhuphe idatha eyimfuneko.
Ukulandelelana (ngokulandelelana) ukucinga kubhekisa kwisakhono sokuqhubekeka ulwazi ngendlela emiselweyo. Oku kubandakanya inyathelo ngenyathelo ngenyathelo apho impendulo inyathelo kufuneka ifunyenwe ngaphambi kokuba kuthathwe elinye inyathelo.
Kwimeko yokuvavanywa kwesoftware, oku kuyahambelana xa silandela iskripthi ngamanyathelo achazwe kwangaphambili kunye neziphumo ezilindelekileyo.
Ukucinga ngokubanzi (okungahambelani nomgaqo) kukukwazi ukubona umfanekiso omkhulu kunye nokuqonda ukuba izinto zakha njani inkqubo enkulu. Kubandakanya ukwandisa inkqubo yakho yokucinga ngeendlela ezininzi, endaweni yokuya kwicala elinye.
Kwimeko yokuvavanywa, kulapho ke senza ukudityaniswa okanye ukuvavanywa kwenkqubo.
Ukuvavanywa kwesoftware kufuna ukucinga nzulu. Yinkqubo yokuhlala ubuza imibuzo kunye nokuhlalutya ulwazi esilufumanayo. Imisebenzi eyahlukeneyo yovavanyo ifuna iinkqubo ezahlukeneyo zokucinga. Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo zokucinga kuya kunceda ekubuzeni imibuzo efanelekileyo.
Xa senza udliwanondlebe nabavavanyi, kufanelekile ukuba sibuze imeko esekwe kwimibuzo ebonisa amandla ovavanyo omvavanyi ngokweentlobo zokucinga ezingasentla.
ku & t ukuphononongwa okuqaqambileyo okuphezulu
Iifowuni ze-iphone 7 ziyaqina
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-iphone 11 pro
Eyona nto ibalulekileyo yokuthatha amanqaku kwi-iPad kunye nePensile yeApple
Ezona zikhuseli zibalaseleyo zeSamsung Galaxy S21
Ifowuni icotha kakhulu ukutshintshela kwi-Wi-Fi ukuya kwidatha yeselula xa uqhagamshelo lubi? Nantsi iapos yokulungisa
I-AT & T iqala ukukhupha i-Android 9 Pie ye-Samsung Galaxy Qaphela i-9
Sketchy iPad mini 6 amanqaku avuzayo ukuya kwiscreen sokuchukumisa i-ID, ikhamera ye-punch-hole
Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Tab S8, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
I-Moto Z Force Droid vs Samsung Galaxy S7
Iselfowuni i-OneTouch Fierce XL Windows 10 izandla-zivuliwe
Amasela anokukhubaza i-iPhone yam kwaye acime iakhawunti yakho ye-iCloud ngenxa yokhuseleko kwi-iOS 7
Ababhalisi be-AT & T / yeQakamba: fumanisa ukuba awukho emgceni wokufumana i-10GB yedatha yasimahla ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-2